Ikamelo elithokomele eliphuzi ekhaya elingokomlando elinesikwele ezine. - I-Airbnb
Ikamelo elithokomele eliphuzi ekhaya elingokomlando elinesikwele ezine.
Oshkosh, Wisconsin, i-United States
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Jessica
Ngiyayithanda indlu yami, futhi ngithemba ukuthi nawe uzoyithanda!!! Yakhiwa ngo-1900, futhi isenayo indlu yasekuqaleni yekalishi! Sigcwele imisebenzi emihle yokhuni, namafasitela amakhulu, nokukhanya kwemvelo okuningi. Inekhishi elihle ngempela, elibuyekeziwe negumbi lokugezela. Inomdlandla omkhulu kangaka! Kuzwakala kukuhle ukuba khona : )
Uzoba negumbi lakho wedwa kuleli khaya elibukekayo lika-1900. Indlu yakhiwe kahle, futhi ayikho emgwaqweni omatasa, ngakho iyindawo ethulile, kodwa igumbi ngalinye linemishini yomsindo omhlophe, kanye nemipheme emnyama yokusiza ukulala uma ugcina amahora angavamile. Itholakala endaweni enokuthula ebangeni elingahanjwa ngezinyawo ukuya kukho konke ongakudinga. Uma ufika, uzokwamukelwa uZoe, ikati lendlu. Izinto eziningi zokhuni zasekuqaleni nezici, ezinawo wonke amasevisi esimanje. Ikamelo ngalinye liza nomugqa wogesi, ukuze ukwazi ukuthatha kalula umsebenzi wakho edeskini lakho langasese, uphume kunoma iyiphi enye indawo yendlu. Ngezindawo zokuhlala ezihlelekile ehholo lokwamukela elihlanganyelwayo, igumbi lokuphumula, indawo yokudlela, nekhishi, kunendawo enkulu yokuthola indawo yakho yokusebenzela ekhuthazayo, noma indawo eyintandokazi yokujabulela inkomishi yekhofi elishisayo. Kukhona nokufinyelela okuhlanganyelwayo emphemeni ongaphambili wokuphumula nompheme omuhle wangemuva. Kukhona umshini wokuwasha nokomisa otholakalayo egumbini elakhelwe ngaphansi, igumbi lokugezela eliyingxenye esitezi sokuqala, kanye negumbi lokugezela eliphelele esitezi sesibili. Okwangasese, okungaphandle kwendawo yokupaka emgwaqweni ngemuva. Ukupaka kungase kube nzima ngezinye izikhathi , kodwa esikhathini esedlule, akukaze kube yinkinga ukuyilungisa nezinye izivakashi.
Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, imibhede yomoya engu- 1
Le ndawo isebangeni lokuhanjwa ngezinyawo ukuya kukho konke ongakudinga!
Kungamabhuloho amabili ukusuka e-Walgreens, kanye nesiteshi segesi. Kungamabhuloho amathathu avela ku-Pick and Save (esinye sezitolo zethu ezinkulu zokudla). Kukhona nezindawo zokudlela eziningi ngaphakathi kwamabhuloho angu-3 noma angu-4, kuhlanganise ne-Dairy Queen, i-Pizza Hut, i-Subway, ama-Starbucks, nezintandokazi zendawo ezifana ne-
Indawo yokudlela yase-Li Yangs yase-China, lapho wonke umuntu efanelekela khona i- $ 7684 ekhethekile yomfundi ehlanganisa isidlo sakho esiyinhloko, irayisi, i-egg roll, nesiphuzo!
I-Leon 's Frozen Custard, evuliwe kuphela phakathi nehlobo, kodwa ine-custard efriziwe ehamba phambili, namantombazane asezindaweni ezipholile eziletha ngqo emotweni yakho!
Indawo yokudlela yase-Chalice, isipiliyoni sokudla okumnandi kwe-sandwiches newayini, ene-bar egcwele, kanye nesimo esihle! Banendawo yomlilo ngaphakathi, ne-veranda ngaphandle, evumela isimo sezulu esivulekile.
Amabhuloho amabili noma amathathu angaphezu kwawo yizindawo ezimbalwa zokudlela zasendaweni.
Kukhona futhi i-Dollar Tree, i-McDonald 's, kanye ne- Kwik Trip, phezulu emgwaqweni.
Singaphezu nje kwamamayela angu- ukuya echibini, ne-Menominee Park enhle. Kukhona i-zoo, ukufika kwesikebhe, izinkundla ezimbili ezahlukene zokudlala zezingane, idokodo lokudoba, ibhishi elincane, ipaki elincane lokuzilibazisa elinokugibela isitimela, i-carousel, nezikebhe zokugwedla eziqashisayo, kanye nomzila omuhle wokuhamba onemishini yokuzivocavoca eceleni kwamanzi, ukuze ujabulele ukuzivocavoca kwakho okugcwele ngaphandle!
Sisondelene ngokulinganayo ne-Wiouwash Trail, umzila we-Wisconsin State ongamakhilomitha angu-41.
Hi : ) My name is Jessica. I love traveling and experiencing new things! I also love meeting new people.
Ngisebenza ngaphandle kwedolobha, ngakho angikho okuningi okubi. Ngivame ukuba nosuku olulodwa noma ezimbili mahhala ngeviki. Uma ngisekhaya, nakanjani ngiyatholakala ngokuxhumana okuningi, noma okuncane, ngendlela othanda ngayo! Ngiyayithanda idolobha lami, futhi ngingathanda ukukubonisa indawo futhi ngikwabelane ngayo nawe! Ngisho ne-Covid, kunezinto eziningi eziphephile ongazenza! Ngihlala ngitholakala ngocingo, futhi uma unezinkinga, ngizoqinisekisa ukuthi zixazululwa.
Ngisebenza ngaphandle kwedolobha, ngakho angikho okuningi okubi. Ngivame ukuba nosuku olulodwa noma ezimbili mahhala ngeviki. Uma ngisekhaya, nakanjani ngiyatholakala ngokuxhumana…
Hlola ezinye izinketho ezise- Oshkosh namaphethelo